आईपीएलमा हालसम्म कुन टिमको प्रर्दशन कस्तो ? (सम्पूर्ण जानकारी) | Hamro Khelkud
आईपीएलमा हालसम्म कुन टिमको प्रर्दशन कस्तो ? (सम्पूर्ण जानकारी)
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमयर लिग (आईपीएल) को १२ औं संस्करणको आजदेखि सुरु हुँदैछ । विश्वका स्टार खेलाडीको जमघट हुने आईपीएलको उद्धघाटन खेलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र चेन्नई सुपरकिंग्स भिड्नेछन् ।
आईपीएलमा ८ शहरका ८ फ्रेन्चाईज टोलीबीच होम अवे मैदानमा गरि एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । जसबाट शीर्ष ४ टोली प्लेअफमा पुग्नेछन् । चेन्नई सुपर किंग्स र मुम्बई इन्डियन्सले सर्वाधिक समान ३-३ पटक उपाधि जितेका छन् । त्यस्तै कोलकता नाइट राइडर्सले २, राजस्थान रोयल्स र सनराईज हैदरावादले समान एक पटक उपाधि चुमेका छन् । किंग्स ईलाभेन पञ्जाब, रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र दिल्ली क्यापिटल्सले हालसम्म आईपीएल उपाधि जित्न सकेका छैनन् ।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दिल्ली क्यापिटल्सबाटै आईपीएल खेल्ने हुँदा अझ महत्वका साथ हेरिएको छ । आईपीएलमा एक टिममा सर्वाधिक २५ जना खेलाडी सम्म अनुबन्ध गर्न पाईन्छ । हरेक खेलमा ७ भारतीय र ४ विदेशी खेलाडी अनिवार्य छ । सन् २००८ देखी सुरु भएको आईपीएलमा हालसम्म कुन टिमको प्रर्दशन कस्तो रह्यो त ? सहभागी ८ फ्रेन्चाइज टोलीको जानकारी :
१. चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएलकै सर्वाधिक सफल टिम हो । चेन्नईको कप्तानी सन् २००८ देखीनै महेन्द्र सिंह धोनीले गर्दै आएका छन् । चेन्नईले ३ पटक उपाधि र ४ पटक फाईनलमा पराजित भएको छ । चेन्नईले सन् २०१०,२०११ र २०१८ उपाधि जितेको थियो । सन् २०१० मा मुम्बईलाई २२ रन,२०११ मा बेंंगलोरलाई ५८ रन र २०१८ मा हैंदरावादलाई ८ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो ।
सन् २००८ को फाईनलमा राजस्थानसँग ३ विकेटले पराजित भयो । सन् २०१२ मा कोलकतासँग ५ विकेटले फाईनलमा पुन पराजित भयो । सन् २०१३ को फाईनलमा चेन्नई मुम्बईसँग २३ रनले पराजित हुँदै उपाधि चुम्क चुकेको थियो । सन् २०१५ को फाईनलमा फेरि मुम्वईसँग ४१ रनले पराजित हुँदै चौथो पटक उप विजेता चित्त बुझाएको थियो । सन् २००९ मा सेमि फाईनलमा पुग्दा सन् २०१६ र २०१७ मा भने चेन्नईलाई दुई वर्षको प्रतिबन्ध लाग्यो । सन् २०१५ को राजस्थानसँगको खेलमा म्याच फिक्सिङ गरेपछि दुई वर्षको प्रतिबन्ध खेप्नु परेको थियो । यस पटक चेन्नईमा अनुभवि खेलाडीको बाहुल्यता छ । धोनीेको उत्कृष्ट कप्तानीमा चेन्नईले फेरि उपाधि जित्न सक्छ ।
२. मुम्बई इन्डियन्स
चेन्नई पछिको सर्वाधिक सफल टिमको रुपमा मुम्मई इन्डियन्सलाई लिने गरिन्छ । मुम्बईले सन् २०१३, २०१५ र २०१७ को उपाधि जितेको थियो । मुम्बईले सन् २०१३ मा २०१५ मा क्रमश २३ र ४१ रनले चेन्नईलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो । सन् २०१७ मा भने राईजिङ पुणे सुपरजाईन्टलाई १ रनले हराउँदै उपाधि चुम्न सफल भयो ।
मुम्बई सन् २०१० मा चेन्नईसँग २२ रनले पराजित हुँदै पहिलो उपाधि जित्न चुकेको थियो । सन् २०११, २०१२ र २०१४ मा प्ले अफ स्थान बनाउँदा अन्य संस्करणमा भने समुह चरणबाटै बाहिरियो । यस पटक मुम्बईलाई पनि उपाधिको दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ । पहिलो खेल २४ मार्चमा दिल्लीसँग खेल्दै प्रतियोगितामा सुरुवात गर्ने छ ।
३. कोलकता नाइड राइडर्स
कोलकताले दुई पटक उपाधि जितेको छ । कोलकताले सन् २०१२ र २०१४ को उपाधि जितेको थियो । सन् २०१२ मा चेन्नईलाई ५ विकेट र २०१४ मा पञ्जावलाई ३ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो । कोलकतालाई उपाधि जिताउँदा दुवै पटक कप्तान गौतम गम्भीर थिए ।
सन् २०११, २०१६, २०१७ र २०१८ मा प्ले अफमा पुग्दा अन्य संस्करणमा समुह चरणबाटै बाहिरिएको छ । यस पटक कोलकताको टिम मिश्रीत छ । पहिलो खेल २४ मार्चमा हैदरावादसँग खेल्दै प्रतियोगितामा सुरुवात गर्ने छ ।
४. सनराईजर्स हैदरावाद
हैदरावदले सन् २०१३ को आईपीएल देखी सहभागिता जनाएको हो । आफ्नो पहिलो संस्करणमा चौथो स्थानमा रहेको हैदरावाद सन् २०१४ र २०१५ मा समान छैटौं स्थानमा रहेर समुह चरणबाटै बाहिरयो । सन् २०१६ मा बेंगलोरलाई ८ रनले पराजित गर्दै उपाधि जित्यो । हैदरावादलाई उपाधि दिलाउने कप्तान थिए डेविड वार्नर ।
सन् २०१७ मा चौथो स्थानमा रहँदा सन् २०१८ मा उप विजेतामा चित्त बुझायो । फाईनलमा चेन्नईसँग ८ विकेटले पराजित भएको थियो । यस सिजनमा हैदरावाद उपाधिको प्रमुख दावेदार टिम हो । हैंदरावादले पहिलो खेल कोलकतासँग २४ मार्चमा खेल्ने छ ।
५. राजस्थान रोयल्स
सन् २००८ अर्थात पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको राजस्थानले त्यस यता फाईनल सम्मको यात्रा तय गर्न सकेको छैन । पहिलो संस्करणमा चेन्नईलाई ३ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो । राजस्थान सन् २०१३, २०१५ र २०१८ मा प्ले अफमा पुग्दा अन्य संकस्करणमा समुह चरणबाटै घर फर्किएको छ ।
सन् २०१५ मा चेन्नईसँग म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा सन् २०१६,१७ को संस्करणमा प्रतिबन्धका कारण गुमाउनु परेको थियो । यस पटक राजस्थानको टिम मिश्रीत छ । पहिलो खेल २५ मार्चमा पञ्जावसँग खेल्ने छ ।
६. रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर
बेंगलोरलाई आईपीएलमा अभागी टिम भन्ने गरिन्छ । खेलाडी अनुसारको प्रर्दशन गर्न नसक्नु बेंगलोरको मुख्य कमजोरी हो । बेंगलोर सन् २००९, २०११ र २०१६ मा फाईनलमा पराजित भएको थियो । सन् २००९ को फाईनलमा डेक्सन चर्जर्ससँग ६ रन, २०११ मा चेन्नईसँग ५८ रन र सन् २०१६ मा हैदरावादसँग ८ रनले पराजित हुन पुग्यो ।
बेंगलोर सन् २०१० र सन् २०१५ मा प्ले अफमा पुग्दा अन्य संस्करणमा समुह चरणबाटै बाहिरिएको छ । यस पटक बेंगलोरलाई उपाधिको दावेदार टिमकै रुपमा हेरिएको छ ।
७. किंग्स ईलाभेन पञ्जाव
आईपीएलमा सुरुवाती लयलाई जोगाउन नसक्नु पञ्जावको मुख्य कमजोरी हो । पञ्जावले पनि हाल सम्म आईपीएलको उपाधि जितेको छैन । सन् २०१४ मा पञ्जाव कोलकतासँग फाईनलमा ३ विकेट पराजित भएको थियो ।
पञ्जाव पहिलो संस्करणमा प्ले अफमा पुगेको थियो भने अन्य सबै संस्करणमा समुह चरणबाटै बाहिरिएको छ । पञ्जावको टिम यस पटक मिश्रीत छ । पहिलो खेल २५ मार्चमा राजस्थानसँग खेल्ने छ ।
आईपीएलकै असफल र सर्वाधिक कप्तान परिवर्तन गर्ने टिम हो दिल्ली क्यापिटल्स । दिल्ली अहिलेसम्म आईपीएलको फाईनल पुग्न सकेको छैन भने १२ कप्तान परिवर्तन गरिसकेको छ । दिल्ली सन् २००८, २००९ र २०१२ मा प्ले अफमा पुगेको थियो भने अन्य सबै संस्करणमा खराब प्रर्दशन गर्दै समुह चरणबाट बाहिरिएको छ । यस संस्करणमा दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट नाम परिवर्तन गरेर दिल्ली क्यापिटल्स बनाएको छ ।
दिल्लीले यस सिजनमा आफ्नो नाम, लोगो र जर्सी परिवर्तन गरेको छ । यस पटक दिल्लीलाई उपाधिको दावेदार टिम पनि मानिएको छ । दिल्लीले पहिलो खेल २४ मार्चमा मुम्बईसँग खेल्दै सुरुवात गर्ने छ । सन्दीप दिल्लीबाटै आईपीएल खेल्ने हुँदा अन्य फेन्चाईज टोलीको तुलनामा दिल्लीलाई विशेष महत्वका साथ पनि हेरिएको छ ।